Los Vascos Chardonnay 2019 ~ ICT.com.mm
HomeLos Vascos Chardonnay 2019
Los Vascos Chardonnay Chardonnay Alcohol: 14% Dry/ 2019 Colchagua – Casablanca Valley/ Chile Tasting Notes Straw yellow colour with glints of green. Fresh, delicate, harmonious and fruity bouquet. Expressive notes of melon,... [Learn more]
Colchagua – Casablanca Valley/ Chile
Straw yellow colour with glints of green. Fresh, delicate, harmonious and fruity bouquet. Expressive notes of melon, banana, grapefruit and exotic fruits on the nose with flavourful, fresh and pleasant appealing character with food length of fruits on the palate.
Pair perfectly with vegetarian dished, rich flavoured of salmon or tuna and poultry. Soft and creamy mild cheeses would beagreat match as well.
ချီလီနိုင်ငံထုတ် Los Vascos Chardonnay 2019 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေတည်ရှိရာ ချီလီနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Colchagua Valley ဒေသမှာရှိတဲ့ Viña Los Vascos ဝိုင်လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2019 ဝိုင်ဖြူ (Tropical & Balanced) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာ၊ အနံအရသာထူးကဲတဲ့ ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါးနဲ့ ကြက်၊ ဘဲ ဟင်းလျာတွေအတွက် လိုက်ဖက်တဲ့ ချီလီဝိုင်ဖြူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ချိစ်အမျိုးအစားတွေဖြင့်လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Los Vascos’s Chardonnay isafresh, delicate wine, withaharmonious, fruity bouquet.The vineyard’s own Chardonnay grapes are complemented byaselection of grapes from the Casablanca Valley, further north between Santiago and Valparaiso.Flavourful, fresh and pleasant, this wine has an appealing character with good length of fruit. The nose offers an explosion of aromas with notes of melon, banana, grapefruit and exotic fruit.